Mugabe's Son-In-Law Granted Bail In Kidnapping Case - allAfrica.com
Former president Robert Mugabe's son-in-law, Simba Chikore, who is accused of unlawfully detaining a former Zimbabwe Airways employee Bertha Zakeyo during a dispute, has appeared in court. He was accompanied to court by his wife, Mrs Bona Mugabe-Chikore. Chikore appeared before magistrate Elisha Singano, who granted him $30 bail.
Former president Robert Mugabe's son-in-law, Simba Chikore, who is accused of unlawfully detaining a former Zimbabwe Airways employee Ms Bertha Zakeyo during a dispute, appeared in… Read more »
Simba Chikore left, with wife Bona Mugabe (file photo).
Zimbabwe: Former President Mugabe's Son-In-Law Accused of Kidnapping
Former President Mugabe's son-in-law Simba Chikore was yesterday picked up for questioning by police on allegations of kidnapping his lawyer following an argument over a labour… Read more »